Iyo nyowani vhezheni yeWebOS Open Source Edition 2.10 yaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeWebOS Open Source Edition 2.10 yakatoburitswa kare
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yepuratifomu yakavhurika webOS Vhura Source Chinyorwa 2.10 mune imwe yeanonyanya kuzivikanwa misiyano ndeye itsva yekuchengetedza yekuwana sisitimu iyo inobvumidza kuwana kune akasiyana marudzi ekuchengetedza (kungave mukati kana mukati megore).
Kune avo vasingazive neWebOS Open Source Edition, iwe unofanirwa kuziva izvo inogona kushandiswa pane akasiyana madhaidhi anotakurika, madhibhodhi, uye infotainment masisitimu zvemotokari. Raspberry Pi 4 mabhodhi anoonekwa seanoreva Hardware chikuva.
1 Nezve WebOS
2 Main matsva maficha eWebOS Open Source Edition 2.10
2.1 Nzira yekuwana sei webOS Open Source Edition 2.10?
Webhu OS yakatanga kugadzirwa naPalm muna2008 uye yaishandiswa mumafoni ePalm Pre nePixie. Kuwanikwa kweMichindwe muna2010 akapfuudza chikuva kuna Hewlett-Packard, mushure maizvozvo HP yakaedza kushandisa chikuva mumaprinta ayo, mapiritsi, malaptop, uye maPC.
Muna 2012, HP yakazivisa kuendeswa kwewebhuOS kune yakavhurwa sosi chirongwa yakazvimirira uye muna 2013 yakatanga kuvhura sosi kodhi yezvinhu zvayo. Muna 2018, iyo webOS Open Source Edition chirongwa chakavambwa, Kubudikidza neiyo LG yakaedza kudzokera kune yakavhurika modhi yekuvandudza, inokwezva vamwe vatori vechikamu uye nekuwedzera huwandu hwemidziyo inoenderana newebhuOS.
Izvo zvakakosha zvewebhuOS ndiyo Sisitimu uye Yekushandisa maneja (SAM), inova nebasa rekumhanyisa mashandiro uye masevhisi, uye iyo Luna Surface Manager (LSM), iyo inoumba mushandisi interface. Izvo zvinhu zvakanyorwa zvichishandisa Qt fomati uye iyo Chromium browser injini.
Kuchengeta dhata mune fomu yakarongedzwa uchishandisa iyo JSON fomati, DB8 yekuchengetedza inoshandiswa, iyo inoshandisa iyo LevelDB dhatabhesi seye backend. Inoshandisa systemd-based bootd yekutanga. Zvekugadzirisa zvemultimedia zvemukati, iyoMediaServer uye Media Ratidza Mutongi (MDC) masisitimu anopihwa, PulseAudio inoshandiswa sevhavha yeruzha. Kugadzirisa otomatiki firmware, OSTree uye Atomic Partition Kutsiva zvinoshandiswa
Main matsva maficha eWebOS Open Source Edition 2.10
Mune iyi vhezheni itsva tinogona kuwana izvo chengetedzo yekuwana sisitimu inoitwa, iyo inopa imwechete interface kuwana akasiyana storages, inosanganisira yekuchengetera kwemukati, madhiraivha eUSB, uye masystem ekuchengetedza gore (kusvika parizvino chete Google Drive inotsigirwa).
The frame inobvumira, kuburikidza neyakajairika mushandisi interface, kuona uye kuvhura magwaro, mifananidzo, uye mafaera kubva kune ese akagadziridzwa ekuchengetedza vatapi.
Iyo browser yeinjiniya inopa yakavharidzirwa kuchengetwa kwechikamu uye yechokwadi makuki, Uye zvakare, nyowani Peripheral manejimendi sevhisi yakawedzerwa kugadzirisa zvigadzirwa zvemupendero, zvinotsigira kudyidzana nemidziyo kuburikidza neGPIO, SPI, I2C uye UART maficha. Iyo sevhisi inokutendera iwe kuronga manejimendi emidziyo mitsva pasina kuchinja iyo sosi kodhi yepuratifomu.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo kugona kweiyo ACG modhi kwakawedzerwa (Access Control Groups), iyo inoshandiswa kudzora mvumo yemasevhisi anoshandisa Luna Bus.
Mune vhezheni nyowani yewebhuOS Open Source Edition 2.10, ese mabasa enhaka ayo akamboshandisa iyo yapfuura modhi yekuchengetedza akaendeswa ku ACG, pamwe ACG mitemo syntax yakashandurwa.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi nyowani yakaburitswa vhezheni, unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Nzira yekuwana sei webOS Open Source Edition 2.10?
Kune avo vanofarira kugona kushandisa webOS Open Source Edition, zvinodikanwa kuti vagadzire iyo system mufananidzo kune yavo kifaa, kune izvi ivo vanogona kubvunza matanho ekutevera kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeWebOS Open Source Edition 2.10 yakatoburitswa kare
Mamwe marongero kubva kuMautic. Chikuva chekushambadzira
Maitiro ekuisa Discord pane yako GNU / Linux distro nhanho nhanho